Piles Q and A လိပ်ခေါင်းရောဂါ အမေးအဖြေများ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Piles Q and A လိပ်ခေါင်းရောဂါ အမေးအဖြေများ
လိပ်ခေါင်းရောဂါကနေ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေက ဝမ်းချုပ်ရင် ညှစ်ရရင် သွေးထွက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဝမ်းမချုပ်စေတဲ့ အစားအစာစားပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ အဆင်မသင့်ရင် လိပ်ခေါင်းမှာသွေးပြန်ကြောပိတ်လို့ ရုတ်တရက် အတင်းနာပြီး၊ မထိုင်နိုင် ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ချက်ချင်းသွေးကြောပိတ်နေတာကိုခွဲပြစ်ရမယ်။ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ပြင်ပလူနာအဖြစ်တောင်မှ ခွဲပေးလို့ ရတတ်တယ်။ ထွက်နေတဲ့ လိပ်ခေါင်းက ပြန်မဝင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ် ပြန်သွင်းရင် ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နေသူတွေမှာထွက်နေတဲ့ လိပ်ခေါင်းကရောင်လာလို့ ပြန်သွင်းမရ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်ရင် လိပ်ခေါင်းကို (ဆားခါး) မှုံ့ကိုအဆီ (ပါရာဖင်ဆီ) တခုခုဆွတ်ထားတဲ့ ပတ္ထီး၊ အဝတ်စမှာတင်ပြီးလိပ်ခေါင်းပေါ် ကပ်ထားပေးရင် အရောင်ကျပြီး၊ ပြန်သွင်းလို့ ရလာမယ်။
ဝမ်းပျော့အောင်စားရမဲ့ အမျဉ်များအစာခေါ်တဲ့ အစားအစာတွေကအကြမ်းဖျင်းပြောရရင် အသီးအရွက်-အသီးအနှံတွေ အကုန်လုံးလိုလိုပါ။ သခွါးသီး၊ ပဲသီး၊ ရုံးမတီ (ရုံးပတီး)သီး၊ မုံလာ ဖြူ-နီ-စိမ်း၊ အာလူး၊ ပြောင်းဖူး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ခရမ်းသီး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ဟင်းနုနွယ်၊ သင်္ဘောသီး၊ မာလကာသီး၊ စွန်ပလွန်သီး၊ ဘယ်ရီသီး၊ သစ်တော့သီး၊ ကီဝီသီး၊ စပျစ်သီး၊ ပန်းသီး၊ နေကြာစေ့၊ မြေပဲဆံ၊ အုံးသီးဆံ၊ ငှက်ပျောသီး၊ လိမ်မော်သီး၊
လိပ်ခေါင်းကနေသွေးထွက်ရင် သွေးတိတ်ဆေးတွေက သိပ်မထိရောက်ပါ။ သွေးထွက်တာ ကြာကြာဖြစ်လို့ သွေးအား နည်းနေမယ်။ အသားအရေ ဖြူရော်ရော် ဖြစ်နေတာနဲ့ အကြမ်းဖျဉ်းသိနိုင်တယ်။ သွေးအားကောင်းဆေး သံဓါတ်ဆေး သောက်ပါ။ သံဓါတ်ကဝမ်းချုပ်တတ်ပြန်တယ်။ ဝမ်းသွားတဲ့အခါနာရင် လိပ်ခေါင်း ထည့်ဆေး တခုခုကို ဝမ်းမသွားခင် ထည့်ပေးလို့ရတယ်။ ဆေးတောင့်လဲလာတယ် (ခရင်မ်) လဲလာတယ်။ တချို့က ချောဆီသဘောဖြစ်ပြီး၊ တချို့က ထုံဆေးသဘောဖြစ်တယ်။
လိပ်ခေါင်းကို ဆေးနဲ့ကုတယ်ဆိုတာခံစားနေရတာတွေ သက်သာစေဘို့ ဖြစ်တယ်။ ရေနွေးထဲမှာ ၁ဝ မိနစ်ကြာထိုင်ပါ။ ထပ်ထိုင်နိုင်လေကောင်းလေ။ ရောင်နေရင် ရေခဲကပ်ပေးပါ။ (ကော်တွန်) အတွင်းခံကိုသာ ခပ်ချောင်ချောင် ဝတ်ဆင်ပါ။ ဝမ်းသွားပြီးတိုင်းစအိုကိုစိုနေတဲ့အဝတ်၊ တစ်ရှူးနဲ့ သန့်ရှင်းပါ။ ရေသုံးတာအကောင်းဆုံးပါ။ နာနေရင် Acetaminophen or Aspirin ဆေးတမျိုးမျိုးသောက်ပါ။ အစာနဲ့ ဆေးနီးပါစေ။
လိပ်ခေါင်းထည့်ဆေးတမျိုးမျိုးထည့်ပါ။ Hydrocortisone ဆိုတဲ့ (ကော်တီဇုံး) ပါတတ်တယ်။ သတိထားဘို့ကနာတာ၊ ရောင်တာ၊ ယားတာတွေ ယာယီသက်သာစေဘို့သာဖြစ်တယ်။ ဆေးနာမယ်တချို့ကတော့ -
- Proctosedyl ointment
- Homeopathic Hemorrhoid Relief ointment
- Anusol HC Ointment
- Avenoc Ointment
- Hemorrhoidal Ointment
- Heel/BHI - Hemorrhoid Relief Ointment 50g
- Hemmorex Ointment 1oz
- Avenoc' Ointment
- Medline Hemorrhoid Relief Ointment -2Oz Tube
1. Rubber Band Ligation သားရေကွင်းနည်း၊
2. Injection Sclerotherapyထိုးဆေးနည်း၊
3. Infrared Photocoagulation အနီအောက်ရောင်ခြည်နည်း၊
4. Laser Coagulation လေဆာနည်း၊
1. Infrared Photocoagulation အနီအောက်ရောင်ခြည်နည်း၊
2. Laser Coagulation လေဆာနည်း၊
ပြန်သွင်းမရတဲ့ လိပ်ခေါင်းအတွက် ခွဲစိတ်နည်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ အပြင်လိပ်ခေါင်မှာ ရုတ်တရက် သွေးပြန်ကြောပိတ်လို့ အတင်းနာရင် ခွဲစိတ်နည်းချက်ချင်းလုပ်တာကောင်းတယ်။
လိပ်ခေါင်းကနေ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ စအိုဝမှာ အရေပြားအသီးလေးဖြစ်မယ်။ ကြီးလာမယ်။ ကျယ်လာမယ်။ လိပ်ခေါင်းထဲက သွေးကြောလေးတွေပိတ်မယ်။ gangrene သွေးမရလို့ တစ်ရှူးသေတာ ဖြစ်မယ်။ စအိုဘေးနေရာ ရင်းရောင်နာမယ်။ သွေးယိုနေတာကြာမယ်။ ကြာရင် သွေးအားနည်းမယ်။ အပြင်လိပ်ခေါင်းက သွေးကြောပိတ်ရာကနေ အနာဖြစ်မယ်။
လိပ်ခေါင်းအတော်များများကသူ့ဖါသာသူ ၁-၂ ပါတ်အတွင်းသက်သာလာ နိုင်တယ်။ ဖိုင်ဘာများအစားအစာတွေ စားပါ။ ရေတနေ့ ၈ ခွက်သောက်ပါ။ ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှု ပိုလုပ်ပါ။ ဝမ်းမာနေရင် ဝမ်းလွယ်မဲ့ အစားအစာတွေ စားပါ။ မန်ကျီးမှည့်ဖျော်ရည်၊ သင်္ဘောသီးမှည့်၊ ကန်စွန်းရွက်၊ Milk of Magnesia ဇွန်းကြီး ၂ ဇွန်းအိပ်ရာဝင်သောက်ပါ။ ခဏခဏမသောက်သင့်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် များနေရင် လျှော့ချပါ။ အလုပ်မအားလို့ ဝမ်းသွားမှာကို ထိန်းထာတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး၊ စအိုတဝှိုက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အဝမလွန်စေနဲ့။ အနေအထိုင် ဂရုစိုက်ပါ။ ကြမ်းပြင်မှာ ဆောင့်ကြောင့် မထိုင်ပါနဲ့။ ဖင်ထိုင်ခုံလိုခုံအနိမ့်ကို မသုံးပါနဲ့။ ချောင်းဆိုးတာ၊ နှာခြေတာလုပ်ရတိုင်း၊ စအိုနေရာကို စိတ်ကနေထိန်းထားပါ။ အလေးအပင်မတာ၊ အထိုင်အထ လုပ်တာမှာလဲ ထိန်းပြီးမှလုပ်ပါ။ အိမ်သာကို ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ရတာမျိုးကိုမသုံးပါနဲ့။ အင်္ဂလိပ်ပုံစံဆိုတာမျိုးသာသုံးပါ။ ခါးကို ၉ဝ ဒီဂရီ ထိုင်လို့ရတာမျိုး။ ဝမ်းသွားပြီးတိုင်းစက္ကူ၊ တစ်ရှူးအစား၊ ရေကိုသာသုံးပါ။ ဝမ်းကိုဂရုစိုက်ပါ။ ရေနွေးထိုင်နည်းလုပ်ပါ။ မဖြစ်လှမှသာခွဲဘို့ စဉ်းစားပါ။